राज्यको कर्तव्य व्यवस्थित गर्न ट्रेड युनियनको चुनावः ब. उपाध्यक्ष पोखरेल (भिडियो सहित) « Janaboli
राज्यको कर्तव्य व्यवस्थित गर्न ट्रेड युनियनको चुनावः ब. उपाध्यक्ष पोखरेल (भिडियो सहित)
नेपालको सन्दर्भमा निजामति क्षेत्रको ट्रेड युनियन २०४७ सालदेखि स्थापित भयो । जतिबेला नेपाल सिमित संगठन थिए । तर अहिले धेरै संगठन भएपछि कर्मचारीहरुको हकहितका सवालमा राज्यले गर्ने निर्णयमा कुन संगठनलाई प्रतिनिधित्व गराउने । भन्ने विषयमा दुविधा देखिन थाल्यो । यस्तो अवस्थाले सरकार र निजामति कर्मचारीका प्रतिनिधिबीच सम्वाद लिन तथा सुझाव लिन नै राज्यका निकायलाई अप्ठ्यारो पर्यो । जसका कारण निजामति कर्मचारीका हक अधिकार स्थापित गराउन ट्रेड यूनियनहरुपनि चुक्न थाले ।
अहिले सरकारले निर्वाचनको मितिपनि घोषणा गर्यो। ऐन बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले निजामति प्रशासनमा आधिकारीक ट्रेड यूनियनको चुनावको मिति घोषणा नै गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीपनि चुनाव गरेर छाड्ने योजनामा छन् । मन्त्रीपरिषद् बैठकले २८ चैतमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत् उप्रान्त मिति वैशाख १० गतेलाई सारि, जेठ १९ गतेलाई सारिएको छ । यसअघि पनि पटक–पटक चुनाव गर्ने कुरा उठेपनि मिति घोषणा भएको थिएन । तर प्रधानमन्त्री ओलीको कडा निर्देशनपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयले १९ गते चुनाव गर्न तयारी पुरा गरिरहेको छ । निजामती प्रशासनमा पार्टीपिच्छे नै ट्रेड यूनियन छन् । जसले प्रशासनमा कर्मचारीको हकहित भन्दा आफ्नै हकहितमा केन्द्रीत हुँदै आएका छन् । यसपटक कुनै पनि हालतमा ट्रेड यूनियनको निर्वाचन गर्ने पक्षमा सरकार र केही संगठन छन् भने केही कुनै हालतमा हुन नदिन शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन् ।
अब प्रस्तुत छ, आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनको तयारीमा रहेका नेपाल निजामति कर्मचारी यूनियनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलसँगको अन्तर्वार्ता ….. -लेखन :- नबराज पराजुली
-प्रस्तुतकर्ता :- इन्द्र आचार्य
वि.सं २०२४ साल वैशाख १४ गते सुनसरी, इनरुवामा जन्मिएका गोपालप्रसाद पोखरेल वैदेशिक माशाखाका ना.सु हुनुहुन्छ । २०४६ साल आषाढ २७ गते देखि नेपाल सरकारको सेवामा प्रेवश गरेका पोखरेल २०४८ साल मै खानेपानी तथा ढल निकास विभागका अध्यक्ष हुनु भएको थियो । ०६४ सालमा आधिकारिक ट्रेड युनियनबाट केन्द्रीय सदस्य बने पश्चात् ०६७ मा सचिव बन्नुभयो । लगत्तै ०७० सालमा ब. उपाध्यक्ष बन्नु भएको थियो । यूनियन अहिले निर्वाचन तयारी समितिमा परिणत भएको छ । तयारी समितिको समेत पोखरेल सदस्य हुनुहुन्छ ।
आधिकारीक ट्रेड युनियन किन ?
तपाईले वास्तवमै राम्रो र समयसामयिक प्रश्न राख्नु भएको छ । २०६२/०६३ पछि हामी निजामति कर्मचारीहरुले प्रत्येक आन्दोलनमा आफ्नो भूमिका राखे बापत तत्कालिन प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पुरस्कार स्वरुप केही कुराहरु दिनुपर्छ भनेर ट्रेड युनियन राईट्सका विषय पनि त्यतिखेरै उठेका हुन् ।
खासगरि आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव नहुञ्जेल सम्मलाई, जति पनि राष्ट्रिय ट्रेड युनियनका संघहरुमा आवद्ध छौँ, तीनै युनियनहरुले आफ्नै विधान अनुसार नै हामी अघि बढ्दै गईरहेका छौँ । ६४ सालदेखि अहिले सम्मको अवस्थामा जति राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड गठन भएका छन्, ती ट्रेड युनियन र हामी हाम्रो कार्यप्रति शतप्रतिशत सन्तुष्ट हुने पक्षमा छैनौँ ।
यी नै कुराहरुलाई व्यवस्थित र मर्यादित गर्न आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गर्न जरुरी छ । र, कर्मचारी युनियन संघले पनि विगतदेखि जोडदार माग गरिरहेको छ । त्यही माग सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले अहिले जेठ १९ गतेलाई चुनाव घोषणा गरेको अवस्था छ । हामी प्रजातन्त्रवादी भएका हिसाबले यो चुनावबाट भाग्ने अवस्थामा पनि छैनौँ । सरकार जसको नेतृत्वमा भएपनि चुनावमा हामी सरिक हुन कुनै कसरत बाँकी राख्ने छैनौँ । आम सर्वसाधारणको नजरमा ट्रेड युनियन प्रतिको धारण मर्यादित र व्यवस्थित गर्न, नकारात्मक पक्षलाई सुधार गर्न पनि चुनाव गर्नु आवश्यकता छ ।
निर्वाचनको पद्धति र अधिकारको विषयहरु कसरी स्थापित हुन्छन् ?
यसमा आधिकारिक ट्रेड युनियनका बनोट तीन तहको हुन्छ, जसमा जिल्ला, विभाग र केन्द्रीय स्तर रहने व्यवस्था छ । प्रत्येक जिल्ला र निर्वाचनमा एकै दिन निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ । जिल्लाको मतपरिणामका हिसाबमा अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव मा क्रमश प्रथम, दोस्रो, तेस्रो र चौथोले जिम्मेवारी पाउने छन् । त्यसै गरी विभागीय संरचनामा पनि सोही बमोजिम नै कार्य क्षेत्र विस्तार हुनेछ । केन्द्रिय स्तरमा पनि अध्यक्ष–कोषाध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष, सचिवको पद क्रमश मतपरिणामको हिसाब अनुरुप नै ,रहने व्यवस्था छ । जिल्ला र विभागमा ११ कार्यसमिति सदस्य हुनेछन् भने केन्द्रियस्तरमा २१ सदस्यीय रहने व्यवस्था छ । बाँकी सदस्य जिल्ला र विभागका हकमा ६ सदस्यीय पनि मतप्रतिशतका आधारमा बाँडफाँड हुनेछन् ।
राजनीतिक दलका संगठनबाट बनेका युनियनहरुलाई किन आवश्यकता छ आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव?
ट्रेड युनियनहरु आलोचित भएका छन् बदनाम भएका छन् । हो, यी नै कुराहरुलाई व्यवस्थित गर्न निजामति सेवा ऐनमा व्यवस्था भएका कुरालाई कार्यान्वयन गर्न पनि आवश्यक छ ।
तपाईँहरुको ट्रेड युनियनलाई कुनै शक्तिले खिच्दै लैजान्छ भन्ने संका लाग्दैन?
कहिँ कतै संका गर्ने ठाउँ पनि प्रशस्तै उब्जीएका छन् । तर हामी ट्रेड युनियनकर्मीहरु लामो समयसम्म होमीएका छौँ । कहिँ कतैबाट त्यस्तो शक्तिले यो ट्रेड युनियनलाई अव्यववस्थित गर्न खोज्छ भने त्यसलाई पनि हामी सब कर्मचारी एकिकृत भएर मुतोड जबाफ दिन सक्छौँ । मलाई लाग्छ, एकपटक यो आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव भईसकेपछि त्यस्तो आक्षेप लाग्छ जस्तो लाग्दैन, अझ झन् व्यवस्थित हुनेछ।
चुनाव बारम्बार लम्बिँदै छ, सिंहदरबारमा बाधा व्यवधान बढ्दै जानुको कारण के त?
अब यसमा घोषणा भएको मितिमा निर्वाचन गर्न नसक्नु नेपाल सरकार नै प्रमुख कारक हो । के कति कारणले चुनावको मिति पर धकेलियो भन्ने विषयमा पनि सरकारले हामीलाई बुसझाउन सकेको छैन । निर्वाचनको मिति लम्बिए नि चुनाब भएरै छाड्छ, त्यो हामीले स्वीकारेकै छौँ । जहाँ सम्म बाधा व्यवधानको कुरा छन्, त्यो सरकारले ख्याल नगर्नाले निम्तिएको आपत्ति हो, यसको मतलब नगर्नु सरकार दोषी हो ।
दश वर्ष सम्म निर्वाचन गर्न नसक्नु लज्जास्पद कुरो भएन र?
यस अवधि सम्म निर्वाचन गर्न हामी दोषी छैनौँ । खासगरी चुनाव नगराउने नियत नेपाल सरकारका पटक–पटकका सरकार दोषी हो । त्यसमा उच्चपदस्थ कर्मचारीले पनि यो आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन चाहेका छैनन् । त्यही निर्वाचन नभएपछि आधा दर्जन बढीको संख्यामा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन संगठन जन्मिए । प्रत्येक दलगत स्वार्थका हेतु पनि प्रस्तुत हुनु बाध्यता पनि छ । हो यी नै कुरालाई रोक्नको लागि पनि युनियनको निर्वाचन गर्न आवश्यक थियो, ढिलै भएपनि सरकारले निर्वाचन मिति तोकिदिएको छ । हामी पनि सहभागी हुने छौँ ।
ट्रेड युनियकर्मीबाट जनताले के आश राख्ने?
सेवाग्राहीलाई हामीले जुन स्तरबाट सेवा दिनु पर्ने हो, त्यसको वितरण सही ढंगले नभएको हुन सक्छ । यसमा कर्मचारी संघ, टे«ड युनियनकर्मी पनि गम्भिर छौँ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा समसामयिक रुपमा सेवा विस्तार गर्ने अवस्था पनि त्यति सहज छैन । आर्थिक अवस्थामा कर्मचारीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक भएर हुन सक्छ, सेवाग्राहीले सुविधा नपाएका ।
त्यसो भए तलब भत्ता कम भएर भ्रष्टाचार बढ्यो ?
त्यसरी त म भन्दिनँ, तर कहिँ कतै कमर्चरीको पूर्वाधार विकास गर्न सरकारले व्यवस्थित कदम चाल्न सकेन कि भन्ने आशंका चाहिँ छ । बाहिर प्रचारबाजीमा भएका कुरामा सबै कर्मचारी भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने छैन । सेवाग्रहीले सेवा नपाउँदा भ्रष्टाचार बढेको हुन सक्छ ।
राजनीतिदलको खाल ओढेर प्रवेश गर्ने पद्धतिलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ?
हामी राष्ट्रसेवक कर्मचारीले यही कुरालाई परिवर्तन गर्न पर्यो । सेवाग्रहीलाई सेवा दिन पर्यो । कार्यलय अबधिलाई अवलम्बन गरी कार्यालय व्यवस्थापन गर्न पनि ट्रेड युनियन कटिबद्ध छ । यही पद्धतिलाई अनुसरण गरी कमी कमजोरीलाई परिवर्तन गरी राजनीति बाहिर रहेर सेवाग्रहीलाई सेवा दिन नै ट्रेड युनियन परिवर्तन गर्ने संवाहक साबित हुन्छ ।
राजनीति रंगलाई कस्तो परिवर्तन आवश्यक छ ?
आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन भएपछि राज्यकोृ सम्पूर्ण क्षेत्रमा हाम्रो प्रतिनिधित्व हुनु् जरुरी छ । ताकि त्यो क्षेत्रमा हाम्रो स्वामित्व, जवाफदेहिताको पनि जिम्मेवार बोध हुनछ । हो यी नै कुराहरुलाई व्यवस्थित गर्न माध्यम मार्फत प्रस्तुत हुन क्षेत्रमा स्वामित्म हुनु जरुरी छ।
तपाईँको ट्रेड युनियन निर्वाचनमा शतप्रतिसत मत ल्याएको खण्डमा नेपाली जनतालाई कसरी आश्वस्त तुल्याउन सक्नुहुन्छ? जस्तो कि
मन्त्रालयबाट हुने सरुवा बढुवालाई कसरी व्यवस्थित गर्नुहन्छ?
कुनै पनि मन्त्रालयबाट हुने गरेको सरुवा बढुवामा मन्त्रालयका सचिवमा हुने जिम्मेवारीलाई एक व्यवस्थित संरचनाद्वारा कार्य थालनी गर्न पनि ट्रेड युनियन हर हमेसा लागि पर्ने छ । स्वयं सरकारले पनि कु्नै आधिकारिकता बिना नै व्यवस्थालाई मिचेर कार्य थालनी गर्छ भन्ने विरोध हुनु स्वभाविक हो । निर्वाचनबाट यो युनियन एक नम्बरमा आएको खण्डमा हामी मध्येबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुले कर्मचारीका मागका विषयका साथै सेवाग्राहीलाई सेवा दिन विशद्ध परिपाटिको थालनी गर्ने छ ।
विभिन्न दलमा विभाजित भएर आफैँलाई स्थापित गर्नलाई ट्रेड युनियनको निर्वाचन माग गर्नु भएको त होईन?
यो विल्कुल गलत कुरा हो । कर्मचारीको हक हितको लागि समसायिक थालनीको प्रयास हो । यस्मा कुनै निजी स्वार्थ लुकेको छैन ।
राज्यले ट्रेड युनियनको अधिकारलाई विभन्न हस्तक्षेप गर्दै आएको छ, अबको कालखण्डमा ट्रेड युनियनको भूमिका कस्तो रहन्छ?
ट्रेड युनियनलाई सिद्धयाउने, कुण्ठित गर्ने, कुनै कुनाकाट खेल खेल्ने प्रबृति नभएका होइनन् । यो अधिकार ल्याउन साथीहरु शहिद भएका कुरा पनि हामीले विर्सनु हुन्न । हाम्रो दुःखको फल हो यो युनियन । कठीन संघर्षका बाबजुद प्राप्त भएको अधिकारलाई खेर जान दिँदैनौँ ।
नेपाली जनता सहित कर्मचारीलाई यस निर्वाचन बारे कस्तो हाह्वान व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ?
सरकारले घोषणा गरेको जेठ १९ गतेको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनावलाई एक उत्सबको रपमा मनाउन अपिल गर्दै सम्पूर्ण कर्मचारी सहित आम जनतालाई सेवाग्राही सेवा प्रदान गर्न यो युनियन राज्यको विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गरी व्यवस्थित शैलीमा प्रस्तुत हुनेमा म विश्वस्त छु, तपाईँहरु पनि विश्वस्त रहनुहवस् ।
चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई पार्टीको चस्माले हेर्दैनौँ, देश हितको नजरले हेर्छौ –डा. महत
काठमाडौ । मित्रराष्ट्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ यही असोज अन्तिम साता नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वको दुई तिहाइ जनमतप्राप्त सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना
समृद्ध समाजवादको आधारशिला निर्माण गर्दै सरकार, नेपाली जनतामा खुशी ल्याउँछौं : सञ्चारमन्त्री
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएका कार्यक्रमले
एजेन्सी । विश्व बजारमा बिहीवार कच्चा तेलको भाउ घटेको छ । अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर
त्रिविले गर्यो भर्खरै नतिजा प्रकाशित [अनलाइन यसरी हेर्नुहोस्]
परीक्षामा लेख्दा यी ५ कुराहरु ख्याल गर्नुहोस्, सोचे अनुसार नतिजा आउँछ
कक्षा ११–१२ को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी जानकारी [सुचनासहित]
यति धेरै संख्यामा सरकारी कर्मचारीको विज्ञापन खुल्यो, १२ कक्षा पास गरेकालाई पनि अवसर
लोक सेवाले यति धेरै संख्यामा खुलायो जागिर, एसइइ दिएकाले पनि दरखास्त दिन मिल्ने [सूचनासहित]